China Yakakura yakapedzisa Wood Bhokisi ine Hinged Lid uye Pamberi Clasp yeUnyanzvi, Crafts, Hobbies uye Kumba Kuchengeta OEM neFekitori | SHUNDA
Yakakura yakapera Wood Bhokisi ine Hinged Lid uye Front Clasp yeUnyanzvi, Crafts, Hobbies uye Kumba Kuchengeta
* Welcome Welcome chero bhokisi *
Yakakwana kune akawanda hunyanzvi, mhizha uye hobby mapurojekiti. Gadzira chakakwana chipo
Matanda huni bhokisi rine hinged muvharo uye rakanakira kuveza chip uye kupisa huni
JEWELRY BOX: Unogona kushongedza iri risingaperi jewelry jewelry bhokisi chero iwe raunoda
HUSINA KUPEDZWA WOOD: Inoitwa kubva kumatanda huni inoita kuti igare kwenguva refu
MULTI-SHANDISA: Ipa kuna amai, musikana, kana mukadzi sechipo chakanaka chavo kuti vachengete mateki, zvishongo, uye zvishongo
Yakasimba, yakasimba, yakasununguka uye isina hwema hunopisa. Chiedza chemavara echinyakare neakatsetseka ekupedzisa, akakwana epuratifomu yezvigadzirwa zvekushongedza zvemarudzi ese.
Yakasarudzika Chipo Pfungwa
Shandisa iri rekuchengetedza bhokisi sechipo chakagadzirwa nemaoko kune wako waunoda. Sanganisira mapikicha, zviyeuchidzo zveusingakanganwiki, kazhinji "akakoshesa" nguva amakapedza pamwechete. Kugadzira chiitiko chitsva chisingakanganwike kune avo vaunotarisira zvakanyanya.
Mashoko matanda huni
Yakasimba, yakasimba, yakasununguka uye isina hwema hunopisa.
Wedzera boho twist kune chero nzvimbo
Nerusherufu rwakagadzirwa nemaoko urwu, rwakakandirwa mune yakasarudzika mwedzi chimiro, ichiita chirevo chakanakira chero nzvimbo. Wedzera inokurudzira yekushongedza kwemwedzi kune yako yekutandarira, nursery, kicheni, yekurara.
Premium yemapuranga bohemian kushongedza
Yakagadzirwa nematanda, masherufu emadziro edu anogara kwenguva refu uye ari nyore kuchenesa. Chengetedza mari yakasimba yekudyara masherufu, rekristal shefu, rusherufu yemabhuku, yakakosha mafuta pasherufu, kana knick knack shefu.
Sungirira pasherefu yako inoyerera mumhepo
Yedu yemadziro yekushongedza sherefu yakagadzirira kuturika, ichikuchengetera iwe nguva pane inonetesa gungano. Shandisa zvimisikidzo kuiisa mune chero nzvimbo yeimba yako uye upenye yako boho rusvingo kushongedza.
Kushamisika mhuri yako neshamwari:
Iri rakavezwa rakavezwa masherefu mune inofadza mwenje dhizaini dhizaini inoita yakasarudzika imba yekuchenesa, Kisimusi, Zuva raAmai, kana chipo chekuzvarwa. Vako vaunoda vachange vari pamusoro pemwedzi!
1. OEM & ODM, Chero huni hunyanzvi hunogona kuve hwakagadzirwa nemhando, ruvara, saizi, nezvimwe.
Shunda Kumba Kushongedza fekitori inyanzvi yehuni hunyanzvi hwekutengesa iyo inopa kugadzirwa, dhizaini, kutengesa uye mushure mekutengesa sevhisi yevatengi vepasirese. Yedu kambani inotarisa mukugadzira nekugadzira mhando dzese dzehuni hunyanzvi zvigadzirwa senge shefu pasherefu, mwedzi masherufu, nyeredzi pasherufu, bhokisi remapuranga, chipo bhokisi, huni chipo etc.
Yakakwira-mhando, yemakwikwi mutengo zvigadzirwa uye yakanakisa sevhisi ndeyedu isingaregi kutsvaga. Svitsa ruzivo mukugadzira kwehuni uye kutumira kunze unotenda kunogona kukupa ruzivo rwekubatana. Nemaitiro matsva & akasiyana uye nebasa rinofungisisa, zvigadzirwa zvedu zvakakunda pralse uye kuvimba kwevatengi vedu, Tarisira mberi kune yako meseji uye unogamuchirwa kufekitori yedu.
Pashure: 5pcs mwedzi chikamu chinoisa sherefu huni mwedzi kutenderera rusherufu shefu yekutandarira imba yekurara vevharanda pati mwedzi kuora kwemadziro kushongedza sherefu
Zvadaro: Hermes yakafanana Saint Louis crystal isina tambo yemubhedha pamubhedha ambient mwenje yekusimudza keturu smart charger husiku mwenje tafura mwenje
Mupanda Wematanda Bhokisi
Eco-Inoshamwaridzika Bhokisi reMatanda
Hinged Wooden Bhokisi
Rectangular Wooden Bhokisi
Yakaenzana Wooden Bhokisi
Asina kupedzwa Wood Bhokisi
Wood Bhokisi NeLatch
Wooden Bhokisi Furemu
Wooden Bhokisi Nechivharo
Wooden Bhokisi Nekiyi
Wooden Bhokisi Ne Mirror
Wooden Bhokisi Nekutsvedza muvharo
Wooden Craft Bhokisi
YeMatanda Kraft Bhokisi Neye Lid
Wooden Chipo Bhokisi
Wooden Chipo Bhokisi Neye muvharo
YeMatanda Yechipo Kurongedza Bhokisi
Wooden Hinged Bhokisi
Wooden Makeup Bhokisi
Wooden Shadow Bhokisi
Wooden Storage Bhokisi
Mabhokisi Ekuchengetedza Matanda
Wooden Tissue Bhokisi
Rectangular mativi chipo yemapuranga kurongedza bhokisi ne ...
Wholesale Poplar huni kumativi bhokisi ukanyatsotarisisa huni che ...